ပွောငျး ယွမ် သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ
ငွေကြေး ပွောငျး ငွေလဲနှုန်းကိုဂဏန်းတွက်စက် အွန်လိုင်း Forex နှုန်းထားများ ငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းသမိုင်း
ငွေလဲနှုန်း updated 06/07/2022 12:40
ယွမ် သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ ပွောငျး ။ ငွေကြေးလဲလှယ်စျေးကွက်အပေါ် အမေရိကန်တဒေါ်လာ အတွက် ယွမ် စျေးနှုန်းယနေ့။
10 ယွမ် = 1.49 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
အမေရိကန်တဒေါ်လာ ရန် ယွမ် ၏ပြောင်းလဲခြင်းအပေါ်ပြန်ကြားရေးတစ်နေ့တစ်ကြိမ် update လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါငွေကြေးကိုလဲလှယ်မှုနှုန်းတစ်နေ့လျှင်ပျမ်းမျှတန်ဖိုးအားရှိပါတယ်။ မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုရင်းမြစ်များမှလဲလှယ်မှုနှုန်း။ 1 ယွမ် 0.15 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ယခုဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့တွင် ယွမ် အမေရိကန်တဒေါ်လာ ရန်မြင့်တက်နေသည်။ 1 ယွမ် ယခုသငျသညျ 0.15 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ငွေလဲလှယ်နှုန်း ယွမ် သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ
တစ်ဦးကလွန်ခဲ့တဲ့လ, ယွမ် 0.15 အမေရိကန်တဒေါ်လာ များအတွက်ဖလှယ်နိုင်ပါသည်။ သုံးလအကြာ, ယွမ် 0.16 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်က, ယွမ် 0.15 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အဘို့ဝယ်နိုင်ပါတယ်။ ယွမ် ငွေလဲနှုန်း အမေရိကန်တဒေါ်လာ ဖို့ဇယားအပေါ်ကြည့်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။ -0.94% - တစ်ပတ်ကို အမေရိကန်တဒေါ်လာ မှ ယွမ် များ၏ငွေလဲနှုန်းအတွက်ပြောင်းလဲမှု။ တစ်လ အမေရိကန်တဒေါ်လာ မှ ယွမ် များ၏ငွေလဲနှုန်းများ၏ပြောင်းလဲမှုကို -1.9% ဖြစ်ပါတယ်။
နာရီ နေ့ ရက်သတ္တပတ် လ3လ ခုနှစ် 10 နှစ်
ငွေလဲလှယ်နှုန်း ယွမ် (CNY) သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ (USD) Forex လဲလှယ်စျေးကွက်အပေါ်အသကျရှငျ
ငွေကြေး ပွောငျး ယွမ် အမေရိကန်တဒေါ်လာ
ယွမ် (CNY) သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ (USD)
10 ယွမ် 1.49 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
50 ယွမ် 7.45 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
100 ယွမ် 14.91 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
250 ယွမ် 37.27 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
500 ယွမ် 74.54 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
1 000 ယွမ် 149.08 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
2 500 ယွမ် 372.69 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
5 000 ယွမ် 745.38 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
သငျသညျ 10 ယွမ် ဘို့ 1.49 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ဖလှယ်နိုင်ပါတယ် ။ ယနေ့ 25 ယွမ် 3.73 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။ ငွေကြေး converter ကိုယခု 50 ယွမ် 7.45 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။ ငွေကြေး converter ကိုယနေ့ပေးသနား 14.91 အမေရိကန်တဒေါ်လာ 100 ယွမ် ။ 250 ယွမ် 37.27 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။ သငျသညျ 74.54 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ရှိပါက, ထို့နောက် ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုဗြိတိသျှအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကို သူတို့ 500 ယွမ် ။
ယွမ် သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ ငွေလဲလှယ်နှုန်း
ယွမ် သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ ယနေ့အချိန်တွင် 06 ဇူလိုင်လ 2022
06.07.2022 0.152894 -0.005296 ↓
05.07.2022 0.158189 -0.00165 ↓
04.07.2022 0.159839 -
03.07.2022 0.159839 0.001991 ↑
02.07.2022 0.157848 -
6 ဇူလိုင်လ 2022, 1 ယွမ် = 0.152894 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။5ဇူလိုင်လ 2022, 1 ယွမ် ကုန်ကျစရိတ် 0.158189 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။4ဇူလိုင်လ 2022, 1 ယွမ် ကုန်ကျစရိတ် 0.159839 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။3ဇူလိုင်လ 2022, 1 ယွမ် ကုန်ကျစရိတ် 0.159839 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။ ပြီးခဲ့သည့်လနိမ့်ဆုံး CNY / USD ငွေလဲနှုန်း 06.07.2022 အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ယွမ် သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ ငွေလဲနှုန်းသမိုင်း
ယွမ် နှင့် အမေရိကန်တဒေါ်လာ ငွေကြေးသင်္ကေတများနှင့်နိုင်ငံများ
ယွမ် ငွေကြေးသင်္ကေတ, ယွမ် ပိုက်ဆံနိမိတ်လက္ခဏာ: ¥. ယွမ် ပြည်နယ်: PRC. ယွမ် ငွေကြေးကုဒ် CNY. ယွမ် အကြွေစေ့: fen.
အမေရိကန်တဒေါ်လာ ငွေကြေးသင်္ကေတ, အမေရိကန်တဒေါ်လာ ပိုက်ဆံနိမိတ်လက္ခဏာ: $. အမေရိကန်တဒေါ်လာ ပြည်နယ်: ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုဗြိတိသျှအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကို, အရှေ့တီမော, မာရှယ်ကျွန်းစု Micronesia, ပလောင်း, မွောကျပိုငျးမာရီယာနာကျွန်းများ, အမေရိကန်, တူရကီနှင့်စိုးကော့စ်ကျွန်းစုအီကွေဒေါ. အမေရိကန်တဒေါ်လာ ငွေကြေးကုဒ် USD. အမေရိကန်တဒေါ်လာ အကြွေစေ့: ရာခိုင်နှုန်း.
မိုဘိုင်းဗားရှင်း ဆက်သွယ်ရန် Cookies ငွေကြေး ပွောငျး © 2022